Amasu Aphumelelayo Okuheha Komphakathi | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 14, i-2012 ULwesihlanu, May 17, 2013 Douglas Karr
Sibhalile mayelana ShortStack esikhathini esedlule nanamuhla bathumele inothi elihle nge-infographic ewusizo. Ungaqagela indlela engcono yokukhuthaza abasebenzisi ukuthi bakhuthaze ukuzibandakanya nomkhiqizo noma ibhizinisi lakho? Uyitholile: imincintiswano! Yilokho ShortStack bathole lapho benza inhlolovo yabasebenzisi abangaphezu kuka-800. (PS: Lesi isixhumanisi sethu sokusebenzisana)
Lowo mphumela awuzange usimangaze - ngoba sibona nsuku zonke ukuthi imincintiswano ingakhuphula kanjani ukuthandwa futhi ikhuthaze ukwabelana. Okusimangazile ukuthi u-38% wabaphendulile ababambe iqhaza ocwaningweni lwethu abakaze bangenele umncintiswano. Ngale ndlela, izithombe zithathe indawo yesibili emncintiswaneni kanti izihloko zodonga zithathe isithathu.
Ama-72% wabaphenduli bacabanga ukuthi angenza kangcono ngemizamo yabo yezokuxhumana
Ama-51% azamile imincintiswano yezithombe
Ukusetshenziswa okungama-62% amathebhu amasiko ukuheha abalandeli babo
Abasebenzisi abangu-14% basebenzisa ividiyo yemincintiswano yabo
Impendulo yami kuphela maqondana nale infographic ukuthi ngiyakholelwa lelo gama Bahlanganyele isetshenziswa kancane ngokukhululeka. Ngiyalithanda igama khohlisa okuningi. Ngokubona kwami, ukuzibandakanya kufana nokwenza ibhizinisi, hhayi nje ukuthola ukuthanda noma ukulandela njengokushintshana ngohlobo oluthile lomvuzo.
Lokhu okutholakele kusabalulekile, noma kunjalo! Amasu angaqhuba ithrafikhi ethe xaxa nokuqwashisa ngomkhiqizo wakho… lapho ungahlanganyela khona izethameli noma umphakathi ngokuqhubekayo.
Tags: imincintiswanohlanganisa abasebenzisilwekucocisanaukuhehainfographicimincintiswano yezithombeama-shortstackabasebenzisi